Carruur jadeeco loo dhigay isbitaal Banaadir
Carruur jadeeco loo dhigay isbitaal Banaadir
Photo | Gabar yar oo jadeeco laga tallaalayo/Axmed Saalixi/AT
(ERGO) - Labaatan carruur ah oo intooda badan ay da’dooda ka yar tahay shan sano ayaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho u jiifa cudurka jadeecada. Carruurta oo laga kala keenay xaafadaha iyo xeryaha lagu barakacay ee Muqdisho iyo deegaannada u dhow ayaa qeyb ka ah 30 carruur ah oo toddobaadkii hore isbitaalka la dhigay.
Isbitaalka ayaa carruurta siinaya tallaalka, dawooyinka ay u baahan yihiin iyo jiif lacag la’aan ah. Dr. Luul Maxamed Maxamuud oo ah madaxa qeybta carruurta ee isbitaal Banaadir ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in carruurta qaar oo xaaladdooda ay roon tahay dib loogu celiyay guryahooda, qaarka liitana la jiifiyay.
Waxay tilmaantay saddexdii bil ee la soo dhaafay inay soo badaneysay tirada carruurta la-ildaran jadeecada ee isbitaalka la keenayay. “Tiro u dhaxeysay 30 ilaa 50 carruur ah ayaa toddobaad kasta naloo keenayay,” ayay tiri Luul. Saddexdii bil ee la soo dhaafay waxaa isbitaalka ku geeriyootay 5 carruur ah oo loo keenay in laga daweeyo jadeecada.
Kiisaska cudurka ayaa aad ugu badan xeryaha lagu soo barakacay ee Muqdisho iyo deegaannada ku xeeran, sida ay sheegeyso Dr. Luul, “sababta uu xeryaha ugu badan yahay waa iyadoo la isku keenay carruur aan horay loo tallaalin oo deegaanno kala duwan laga keenay. Qaar qaba cudurka marka ay kuwo aan qabin u yimaadaan, carruurta oo dhan ayuu ku wada dhacayaa.”
Faaduma Maxamed Suldaan oo ka mid ah dadka deggan xero lagu barakacay oo ku taalla degmada Waaberi ee Muqdisho waxay isbitaalka kula jirtaa labo wiil iyo labo gabdhood oo ay dhashay oo ay soo ridatay jadeecada. Wiilka ugu yar carruurteeda xanuunsan waa sanad jir. Waxay Raadiyo Ergo u sheegtay in isbitaalka markii ay keentay carruurteeda la siiyay dawooyin. “Cirbado ayay iigu dureen, daawooyin afka looga dhibcinayo ayay ii siiyeen, goojooyin ayay indhaha uga shubeen, boomaatooyinna way mariyeen. Way fiicnaadeen hadda alxamdulillaah,” ayay tiri.
Xaawa Axmed Xuseen waxay isbitaalka kula jirtaa gabadheeda oo jirta 18 bilood oo ay hayso jadeeco. “Waxaan ku arkay qandho daran, korkeeda oo dhanna shucaac ayaa ka soo baxay,” ayay tiri. “Isbuuc ayaan guriga ku haynay, annagoo u haysannay inay qandho yar hayso oo ay iska caafimaadi doonto.” Xaawa waxay dhaqaatiirta u sheegeen in gabadheeda oo jadeecada ay gudaha ugu noqotay loo baahnaa inay goor hore geyso xarumaha caafimaadka.
Xaawa ayaa caddeysay inay hadda soo hagaageyso xaaladda caafimaad ee gabadheeda, “cirbado ayaa la duray, hadda qandhadi way ka degtay, nabrihina way bogsoodeen,” ayay tiri. Waxay rajeynaysaa inay isbitaalka ka bixi doonaan labo maalin kaddib oo ay dib ugu noqonayaan gurigooda oo ku yaalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Dr. Luul ayaa sheegtay inay cudurka halis ugu jirto cid kasta oo aan horay u helin tallaal caafimaad. “Cudurkaan ka hortaggiisa waa tallaal, kaas oo lagu yareyn karo oo xitaa lagu baabi’in karo,” ayay tiri. Waxay waalidka kula talisay inay carruurtooda tallaalaan, maaddaama qof kasta oo laga tallaalay uusan cudurka ku dhaceynin oo uu helayo difaac.